ဆည်မြောင်းဥပဒေ – laws | Kyaw Zaw Oo's Blog
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ရက်)
၁။ ဤဥပဒေကို ဆည်မြောင်းဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။
(က) ဆည်မြောင်း ဆိုသည်မှာ ရေပေးဝေရန်ဖြစ်စေ၊ ရေသိုလှောင်ရန်ဖြစ်စေ စီမံဆောင်ရွက်ထားသော ဆည်၊ ကန်၊ ရေလှောင်တမံ ၊ ရေလွှဲဆည်၊ ရေတံခါး၊ ရေမြောင်း၊ ရေတင်စက်ရုံ၊ မြေအောက်ရေတွင်း၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော မြစ်၊ ချောင်း၊ ရေကန်၊ ရေအိုင်သဘာဝရေနုတ်မြောင်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ တူးမြောင်း၊ ရေသွင်းရေလွှဲမြောင်း၊ မြောင်းပေါင်၊ ကမ်းပါးထိန်းနံရံတို့ကိုဆိုသည်။ အဆိုပါစကားရပ်တွင် ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်း၊ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော အဆောက်အအုံနှင့်စက်ယန္တရား လည်းပါဝင်သည်။
(ခ) ဆည်မြောင်းနယ်နိမိတ် ဆိုသည်မှာ ဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် ဦးစီဌာနက ဆည်မြောင်းအလိုက် အမိန့် ကြော်ငြာစာဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်သည့်နယ်နိမိတ်ကိုဆိုသည်။
(ဂ) ကျေးရွာဆည်မြောင်း ဆိုသည်မှာ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကျေးရွာဆည်မြောင်းအဖြစ် ကြေညာ ထားသည့် ဆည်မြောင်း၊ ရေမြောင်း သို့မဟုတ် ရေလှောင်တမံနှင့်ကန်ကို ဆိုသည်။
(ဃ) လယ်ကြားမြောင်း ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ဆည်မြောင်းမှ ရေပေးဝေ သော ရေမြောင်းတစ်ခုခုနှင့်ဆက်လျက် သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း တူးဖော်သည့်ရေမြောင်းနှင့် သက်ဆိုင် သည့် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကိုဆိုသည်။
(င) ရေနုတ်မြောင်း ဆိုသည်မှာ ဆည်မြောင်းများမှ ပိုလျှံရေနှင့် သဘာဝအလျောက်စီးဆင်း သောရေ ကြောင့် ရေကြီးနစ်မြုပ်ခြင်း၊ ရေတိုက်စားခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်စေ၊ ရေပေးသွင်းရန်ဖြစ်စေ တူးဖော် ထားသော ရေမြောင်း သို့မဟုတ် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရေမြောင်း၊ ယင်းရေမြောင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဆောက်အအုံများကို ဆိုသည်။
(စ) ကျေးရွာရေနုတ်မြောင်း ဆိုသည်မှာ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ကျေးရွာရေနုတ်မြောင်းအဖြစ် ကြေညာ ထားသည့် ရေနုတ်မြောင်းကိုဆိုသည်။
(ဆ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်က စီမံခန့်ခွဲသော ဆည်မြောင်း ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီက သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီ စီမံခန့်ခွဲရန် လွှဲပြောင်းရယူထားသော ဆည်မြောင်းကိုဆိုသည်။
(ဇ) ရေယာဉ် ဆိုသည်မှာ လှေ၊ သမ္ဗန်၊ သစ်ဖောင်၊ ဝါးဖောင်၊ အခြားစက်တပ် သို့မဟုတ် စက်မဲ့ရေယာဉ် တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ရေတွင်ပေါ်သည့် အခြားအရာဝတ္ထုတို့ကိုဆိုသည်။
(ဈ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနကိုဆိုသည်။
(ည) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။
(ဋ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံကိုဆိုသည်။
(ဌ) ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းသို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သို့မဟုတ် ခရိုင်ရှိဦးစီးဌာနတာဝန်ခံကိုဆိုသည်။
(ဍ) မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ ဦးစီးဌာနတာဝန်ခံကိုဆိုသည်။
(ဎ) ရေခွန် ဆိုသည်မှာ ရေအသုံးပြုခြင်းအတွက် ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
(ဏ) ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်လျက် ရှိသော အဆောက်အအုံများ ပုံစံတကျရှိစေရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရ သော လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။
(တ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ဆည်မြောင်းကျိုးပေါက်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ပျက်စီးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက အချိန်မီ ပြင်ဆင်ရသော လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။
(ထ) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများကိုဆိုသည်။
(က) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်အတွက် ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ) တည်ဆောက်ပြီးဆည်မြောင်းများကို ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်း သိမ်းရန်၊
(ဂ) ကျေးရွာဆည်မြောင်းနှင့် ကျေးရွာရေနုတ်မြောင်းများ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဃ) ဆည်မြောင်းများကို ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျရောက်လာပါက ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေရေးအတွက် အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်စေရန်၊
(င) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ဒေသအတွင်း ရေလိုအပ်ချက်ကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ရရှိစေရန်၊
(စ) ဆည်မြောင်းများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေးအတွက် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ပြည်သူ များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်စေရန်။
၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်လျှင် ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ပြည်သူများကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန်လုံလောက်သောအချိန် ပေး၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ရမည်။
၅။ (က) ပုဒ်မ ၄ အရ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဆည်မြောင်းအရာရှိသို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးခြင်းခံရသော ဦးစီးဌာနအရာရှိသည် ခရိုင်အုပ်ချုပ် ရေးမှူး၊ ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးကြိုတင်စူးစမ်းလေ့လာ တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်း များနှင့် ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်မည့် နယ်နိမိတ်လျာထားခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ခ) ဝန်ကြီးဌာနသည် ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့်မြေသိမ်းဆည်းခြင်း လုပ်ငန်းကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၆။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ဆည်မြောင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယင်းလုပ် ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်သော မြေများ၊ အဆောက်အဦများ၊ သီးနှံများ၊ စားပင်သီးပင်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံး မှုအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ပြည်သူများကြိုတင်သိရှိရန် လုံလောက် သော အချိန်ပေး၍ ကြေညာရမည်။
(၁) လျော်ကြေးပေးရန် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးရမည်။
(၂) စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ လျော်ကြေးပေးရန်ရှိပါက လျော်ကြေးငွေကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ရမည်။
(၃) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ မိမိ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လျော်ကြေးတောင်းဆိုသူထံ စာဖြင့်ဆောလျင်စွာ အကြောင်းကြားရမည်။
(ခ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ လျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်ကို မကျေနပ်လျှင် လျော်ကြေးတောင်း ဆိုသူ သည် အကြောင်းကြားစာရရှိသည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီသို့ အယူခံဝင်ရောက်နိုင်သည်။
(ဂ) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ်အတည်ဖြစ်သည်။
(ဃ) လျော်ကြေးငွေပေးချေခြင်းကို ဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၈။ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ လျော်ကြေးပေးသည့်ကိစ္စရပ်များ ပြီးပြတ်သည့်အခါ ခရိုင်ဆည်မြောင်း အရာရှိသည် ဆည်မြောင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဆည်၊ တာတမံလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
၉။ သဘာဝရေစီးရေလာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဆည်မြောင်း၊ တာတမံများ ရွေ့လျောပျက်စီးလာ၍ ဆည်မြောင်း၊ ဖြတ်မြောင်းများအသစ်ပြောင်းရွှေ့တူးဖော်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မြေစာများ စုပုံခြင်းပြုရာတွင် လယ်ယာမြေနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးငွေတောင်းခံလာ မှုများကို ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိသည် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
၁၀။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၉ ပါ လျော်ကြေးငွေတောင်းဆိုမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိ၊ ခရိုင်ဆည်မြောင်း အရာရှိနှင့် မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိတို့သည် တည်ဆောက်ပြီး ဆည်မြောင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အဆောက်အအုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ဆည်ရေပေးဝေခြင်းမပြုမီ ဆည်မြောင်းများနှင့် ရေပေးအဆောက်အအုံများ ပုံစံတကျရှိမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေတို့ကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များ အချိန်မီပြုပြင်ခြင်း၊
(ခ) ဆည်မြောင်းပေါင်အတွင်း ခြတောင်ပို့များ၊ ကြွက်တွင်းများကို တူးဖော်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် မြေသစ် ဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ဆည်မြောင်းအတွင်းရေမှတ်တိုင်များ စိုက်ထူ၍ ရေပေးဝေချိန် တစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊
(င) ဆည်မြောင်းအတွင်း ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်အရာဝတ္ထုများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်း၊
(စ) ရေလှောင်တမံများ၏ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ရေထိရောက်စွာသိုလှောင်နိုင်ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဆ) ရေသွင်းရေထုတ်တံခါးများ၊ ရေပိုလွှဲနှင့်ယင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသော ရေတံခါး၊ ရေတံခါးရွက်များ၊ သဲထုတ်ရေတံခါးများနှင့် ဆက်စပ်နေသော စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများစစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်း၊
(ဇ) ရေလွှဲဆည်၊ ရေပိုလွှဲမှထွက်လာသော ရေများကြောင့်အောက်ခြေကွန်ကရစ် ကြမ်းခင်းများပျက်စီးမှု ရှိပါက ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) ရေလွှဲဆည် အထက်ဘက်ရှိရေလျှံတာရိုးထိပ်ကို ရေကြီးသည့်အချိန်တွင် တိုက်ရိုက်မြစ်ရေတိုက် စားခံရ၍ မြစ်ရေကျပြီးလျှင် မပျက်မကွက် စစ်ဆေးခြင်း၊
(ည) အုတ်ပန်းရံ လုပ်ငန်းများ၏ ကွဲအက်ကြောင်းများနှင့် ကျောက်စီလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးနိုင်သည့် အခြေအနေကို အချိန်မီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဋ) ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားသော ဆည်မြောင်းများ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေ ထိုင်ခြင်း၊ ကျူးကျော်စိုက်ပျိုးခြင်းများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဌ) ရေဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးပြီး အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် ဆည်များ၊ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများ၊ မြေအောက်ရေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရေပေးဝေမှုစနစ်နှင့်ရေသောက်စနစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊
(ဍ) ကျေးရွာဆည်မြောင်းများနှင့် ကျေးရွာရေနုတ်မြောင်းလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်း ရေးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၁၂။ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သာမန်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အထူးပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၃။ ဆည်မြောင်းမှရေကို ရယူသုံးစွဲရန် လယ်ကြားမြောင်း ဖောက်လိုသူ၊ လက်ရှိလယ်ကြားမြောင်းအား ပြုပြင်မွမ်းမံလိုသူ သို့မဟုတ် လက်ရှိလယ်ကြားမြောင်းကို လွှဲပြောင်းလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဆည်မြောင်းအရာရှိထံ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
၁၄။ မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၁၃ အရ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါလိုအပ် သည်များကို စိစစ်၍ လယ်ကြားမြောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်း ရယူခြင်းကို ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိက ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်စေရန် မိမိ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ အကျိုးဆက်နွယ်သော တောင်သူလယ်သမားများ၏ သဘောထား မှတ်ချက်ပါ စုစည်းဖော်ပြ၍ ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိထံ တင်ပြရမည်။
(က) ပုဒ်မ ၁၄ အရ မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိ၏ တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီးလယ်ကြားမြောင်းဖောက် လုပ်ရန်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံရန် သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းရယူရန် ခွင့်ပြုကြောင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ကြောင်း ပြုရမည်။
(ခ) ရေမြောင်းတစ်ခုတူးဖော်နေစဉ် သို့မဟုတ် တူးဖော်ပြီးနောက် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဆည်ရေ သောက်ဧရိယာအတွင်းလိုအပ်သော လယ်ကြားမြောင်းများတူးဖော်ရန် တာအူကြောင်းပေးခြင်း၊ တည် ဆောက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဂ) လယ်ကြားမြောင်းဖြတ်သန်းရာ လယ်ယာမြေများအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် လိုအပ်ပါက မိမိ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားရမည်။
၁၆။ လယ်ကြားမြောင်းအသုံးပြုသူတို့သည် လယ်ကြားမြောင်းအများအပြားဘေးချင်းယှဉ်ရှိခြင်း၊ အ လျားရှည်စွာ စီးဆင်းလျက်ရှိခြင်းနှင့် နီးကပ်လွန်းခြင်းတို့ကြောင့် နုန်းစွန့်ရန် နေရာလပ်မရှိခြင်း နှင့်ကုန်ကျငွေများသော အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လျှင် ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိထံ တင်ပြနိုင်သည်။ ခရိုင် ဆည်မြောင်းအရာရှိသည် အဆိုပါတင်ပြချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့် စိစစ်မှုများပြုလုပ်ပြီး လယ်ကြားမြောင်းများပူးတွဲခြင်းသို့မဟုတ် အစားထိုးပြင်ဆင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၁၇။ လယ်ကြားမြောင်းအသစ်တူးဖော် ဖောက်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းရယူခြင်းအတွက် လယ် ကြားမြောင်းဖြတ်သန်းရာ တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ မြေလက်ရှိဖြစ်သူတို့က လယ်ကြားမြောင်းမှ ရေကို ရယူ သုံးစွဲပါက ယင်းမြေအတွက် လျော်ကြေးခံစားခွင့်မရှိဘဲ သစ်ပင်နှင့်သီးနှံပျက်စီးမှုအတွက်သာ လျော်ကြေးခံစားခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ယင်းမြေလက်ရှိဖြစ်သူသည် လယ်ကြားမြောင်းမှရေကို ရယူသုံးစွဲပါက ရယူထားသော လျော်ကြေးငွေကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။
၁၈။ ပုဒ်မ ၁၇ အရ လယ်ကြားမြောင်း သို့မဟုတ် မြေနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူသည် လယ်ကြား မြောင်းအသစ်တူးဖော်ဖောက်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်လိုပါက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကန့်ကွက်တင်ပြနိုင်သည်။
၁၉။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၈ အရ ကန့်ကွက်တင်ပြချက်ကို ရရှိလျှင်-
(ခ) စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ကန့်ကွက်တင်ပြချက်ကို လက်ခံ၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မ ဟုတ်ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
၂၀။ လယ်ကြားမြောင်းဖောက်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖြစ် စေ၊ လျော်ကြေးငွေကိုဖြစ်စေ လယ်ကြားမြောင်း အသုံးပြုသူများက ပူးတွဲ၍သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦး ချင်းသော်လည်းကောင်း ကျခံရန် တာဝန်ရှိစေရမည်။
(က) အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်း၊ ဆည်မြောင်း သို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်းကို ဖြတ်ကျော်၍ ရယူရန် လို အပ်ပါက ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ရေအသုံးပြုသူများက ကျခံရမည်။
(ခ) ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၂။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် လယ်ကြားမြောင်းအသစ် ဖောက်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းရယူခြင်း အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ လယ်ကြားမြောင်းကို လွှဲပြောင်းရယူခြင်းအတွက် ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှု လျော်ကြေးကိုလည်းကောင်း လယ်ကြားမြောင်းဖောက်လုပ်သူ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းရယူသူက ကျခံ ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၂၃။ လယ်ကြားမြောင်း အသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်းအတွက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတ်မှတ်သော ကုန် ကျစရိတ်ကို လယ်ကြားမြောင်းအသုံးပြုသူကကျခံရန် ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လယ်ကြား မြောင်းကို လွှဲပြောင်းရယူခြင်းအတွက် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတ်မှတ်သော ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလျော်ကြေးကို လွှဲပြောင်းရယူသူက ကျခံရန် ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း လယ်ကြားမြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပေးအပ်ခြင်းမပြုဘဲ နေနိုင်သည်။
၂၄။ လယ်ကြားမြောင်းအသုံးပြုခွင့်ရှိသူသည်ရေထွက်ပေါက်ကို ပျက်စီးစေခြင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ထွင်ခြင်းပြု လုပ်လျှင် ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိက ယင်းလယ်ကြားမြောင်း အသုံးပြုသူကို လယ်ကြားမြောင်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိသူအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ယင်းလယ်ကြားမြောင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ရသည့်ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံစေရမည့်အပြင် ဆည်မြောင်းမှ ရေပေးဝေမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားနိုင်သည်။
၂၅။ ဝန်ကြီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲသော ဆည်မြောင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်က စီမံ ခန့်ခွဲသော ဆည်မြောင်းတွင်ဖြစ်စေ ပြည်သူအများလွယ်ကူစွာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ရန် လိုအပ်သော နေရာများတွင် သင့်လျော်သည့် ဆည်မြောင်းဖြတ်ကျော်တံတားများကို ဆောက်လုပ်ပေးရမည်။
၂၆။ ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိသည် အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လျှင် ဆည်မြောင်းမှရေ ပေးဝေမှုကို ရေသုံးစွဲသူများအား ကြိုတင်အသိပေး၍ ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်-
(က) ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ရေပေးဝေမှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် လိုအပ်ခြင်း၊
(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိကရပ်ဆိုင်းရန်ညွှန်ကြားခြင်း၊
(ဂ) လယ်ကြားမြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဆည်မြောင်းရေများ အကျိုးမဲ့စီး ထွက်ခြင်းနှင့် ဆည်ရေ ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ခြင်း။
၂၇။ ပုဒ်မ ၂၆ ပါ အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ရေပေးဝေမှုရပ်ဆိုင်းခြင်းခံရသည့်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုအပေါ် ဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင် စီတို့က ပေးလျော်ရန် တာဝန်မရှိစေရ။ သို့ရာတွင် ရေသုံးစွဲသူသည် ဆည်မြောင်းရေအသုံးပြုခြင်းအတွက် ကောက်ခံသော ရေဖိုးငွေများပေးဆောင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဆည်မြောင်းရေသုံးစွဲသူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ
၂၈။ ဆည်မြောင်းတစ်ခုမှ ပေးဝေသည့် ရေသည် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံတစ်သီးစာအတွက်ပေး ဝေခြင်းဖြစ်လျှင် ထိုသီးနှံရင့်မှည့်ချိန်အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်နှစ်အတွင်း တစ်သီးစာထက်ပို၍ သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် ရေပေးဝေခြင်းဖြစ်လျှင် ထိုသီးနှံများ ရင့်မှည့်ချိန်အထိ သုံးစွဲနိုင်သည်။
၂၉။ ဆည်မြောင်းရေသုံးစွဲသူသည် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်စေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုရန်ဖြစ်စေ ပေးဝေသည့်ဆည်မြောင်းရေအတွက် ကျသင့်သည်ရေခွန်ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပေးဆောင်ရမည်။
၃၀။ ဆည်မြောင်းသို့မဟုတ် လယ်ကြားမြောင်းမှရေကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် တောင်သူများ စိုက်ပျိုးရေရယူသုံးစွဲရေးအဖွဲ့ကို ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။ ယင်းအဖွဲ့ သည်ပေးဝေသောရေပမာဏကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ရေဖြန့်ဝေစနစ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရမည်။
၃၁။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် မြို့နယ်အလိုက်တည်ရှိနေသော ကျေးရွာဆည်မြောင်းသို့မဟုတ် ကျေးရွာ ရေနုတ်မြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါတို့ကို ပြည့်စုံစွာ စာရင်းပြုစုပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရအဖွဲ့သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ် နည်းလမ်းအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်-
(က) ဆည်မြောင်း၊ ရေနုတ်မြောင်း၊ တာတမံများ၊ ရေမြောင်း၊ ရေလွှဲဆည်၊ ရေတံခါးနှင့် ယင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ၏ တည်နေရာနှင့်အမျိုးအမည်၊
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါလုပ်ငန်းများမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရသည့် လယ်ယာမြေများနှင့် ယင်းမြေများပေါ်တွင် ကောက်ခံရရှိနိုင်သော ရေခွန်ရှိလျှင် ၎င်းရေခွန်စာရင်း၊
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါလုပ်ငန်းများနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုသည့် တာတမံများ၊ ရေ မြောင်းများ၊ ရေလွှဲဆည်များ၊ ရေတံခါးများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာပြုပြင်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များနှင့် ရန်ပုံငွေရရှိရေးဆောင် ရွက်ရန်နည်းလမ်းများ။
ရေနုတ်မြောင်းအဖြစ်ကြေညာခြင်း၊ ပိတ်ဆို့မှုကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လျော်ကြေး
၃၂။ ဝန်ကြီးဌာနသည် မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင် သို့မဟုတ် ရေမြောင်းတစ်ခုခုတွင် ရေစီးရေလာတားဆီး ပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့် အများပြည်သူအကျိုးကို ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည်ဟု ယူဆလျှင် ဤဥပဒေအလို့ငှာ ယင်း၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းသည် ရေနုတ်မြောင်းဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သတ်မှတ် ၍ တားဆီးပိတ်ဆို့နေခြင်းအား ဖယ်ရှားနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
၃၃။ (က) ပုဒ်မ ၃၂အရ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ပြီးပါက ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိ သို့မဟုတ် ဤကိစ္စအလို့ငှာ ဝန်ကြီးဌာနကအခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းခြင်းခံရသူသည် အောက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ဆောင် ရွက်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်နိုင်သည်-
(၁) ရေနုတ်မြောင်းတွင် တားဆီးပိတ်ဆို့နေသည့်အရာကို သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ဖယ်ရှားရန်၊
(၂) ရေနုတ်မြောင်းလုပ်ငန်းတွင် တားဆီးပိတ်ဆို့နေသည့် အရာကို သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သတ်မှတ်သည့် အချိန်အတွင်း ပြုပြင်ရန်၊
(၃) မိမိထံမှစာဖြင့် ရေးသားထားသည့် သဘောတူညီချက်ကို ဦးစွာရယူခြင်းမပြုဘဲ ရေနုတ်မြောင်း တွင် တားဆီးပိတ်ဆို့သည့်အရာ တစ်ခုခုပြုလုပ် တည်ဆောက်မှုကို တားမြစ်ရန်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရ အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံရသူက သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း အမိန့်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်လျှင် တားဆီးပိတ်ဆို့နေသည့်အရာကို အဆိုပါအမိန့်ထုတ်ပြန်သူကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှား ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းပြုရာတွင် ကုန်ကျစရိတ် များကို အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းခံရသူထံက သော်လည်းကောင်း၊ ထိုသူ၏ အကျိုးသက်ဆိုင်သူ ထံကသော် လည်းကောင်း တောင်းခံနိုင်သည်။
၃၄။ ပုဒ်မ ၃၃ အရ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကို လိုက်နာလျက်တားဆီးပိတ်ဆို့နေသည့်အရာကို ဖယ်ရှား ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လျော်ကြေးတောင်းဆိုလိုသူသည် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသတ်မှတ်ကာလအတွင်း တင်ပြနိုင်သည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုအတွက် ပုဒ်မ ၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဆောင် ရွက်ရမည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဆည် မြောင်းအရာရှိ၊ ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိနှင့် မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိတို့၏ တာဝန်များ
၃၅။ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိ၊ ခရိုင်ဆည် မြောင်းအရာရှိနှင့် မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိတို့သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး အတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) မိုးခေါင်မှု ဘေးဒဏ်ကျရောက်ပါက ရေလှောင်တမံ၊ ရေလွှဲဆည်များ ဝင်ရေလျော့နည်းပြီးရေ လှောင်ပမာဏ ကျဆင်းလာနိုင်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေနှင့် သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေး ချွေတာ သုံးစွဲရန် ပြည်သူလူထုသို့ အသိပညာပေးခြင်း၊
(ခ) ဆည်ရေဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးနိုင်ရေးအတွက် ရေပေးမြောင်းများ၊ လယ်ကြားမြောင်းများကို ကြိုတင်ပြု ပြင်တူးဖော်ခြင်း၊
(ဂ) ရေလှောင်တမံ၊ ရေလွှဲဆည်နှင့် ရေပေးခြင်းများအတွက် အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သုံးစွဲရသည့် ပစ္စည်းများကို ကြိုတင်စုဆောင်းထားခြင်း၊
(ဃ) ဆည်၊ ကန်၊ ရေလှောင်တမံများ ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရန်ထူးပေါက်များ၊ ရေစိမ့်ယိုမှုများစစ်ဆေးခြင်း၊ ရေစီးကြောင်းများ၊ ခြုံနွယ်များမရှိစေရေး ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) ရေလှောင်တမံကြီးများအတွက် သင့်လျော်သော ရေလွှတ်ခြင်း၊ ရေလွှဲခြင်း၊ ရေပိတ်ထားခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးစီမံချက်များ ရေးဆွဲထားရှိခြင်း၊
(ဆ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရန် ခရိုင်၊ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများနှင့် သက် ဆိုင်သည့် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာပြည်သူများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် သင်တန်းများဖွင့် လှစ်ပို့ချဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဇ) ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သော ရေလှောင်တမံ၊ ရေလွှဲဆည်များတွင် ရေကင်းစောင့် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ချထားခြင်း၊ အချိန်ပြည့် ဆက်သွယ်နိုင်သော ဆက်သွယ်ရေး စနစ်ထားရှိခြင်း၊ အထူး ကိစ္စအနေဖြင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းပို့ခြင်း၊
(ဈ) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မည်ဆိုပါက ဘေးအန္တရာယ်မလွတ်ကင်းနိုင်သော အနီးပတ်ဝန်း ကျင်ဒေသရှိ ပြည်သူများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြိုတင်အသိပေးနိုင်ရန်အတွက် ကြိုတင်သတိပေးခြင်း အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း၊
(ည) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက လိုအပ်သော အရေးပေါ်ပစ္စည်းများနှင့်လုပ်အားများရရှိ ရန် သက်ဆိုင်ရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဋ) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်များထိခိုက်မှုကို လျော့နည်းစေရန်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေရှိစေမည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချသည့် နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်း အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
၃၆။ ဆည်မြောင်းသို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်းတစ်ခုခု ကျိုးပေါက်ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကျရောက်လျှင် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်လျှင် ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည်-
(က) အန္တရာယ်ကျရောက်သည့်သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သည့် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ များကို စုံစမ်းရန်၊
(ခ) အရေးပေါ်လုပ်သားစာရင်းကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြုစု၍ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် တင်ပြစေရန်။
၃၇။ (က) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ လုပ်သားစာရင်းကို ခရိုင်ဆည် မြောင်းအရာရှိထံ ပေးပို့ရမည်။
(ခ) ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိသည် ပုဒ်မခွဲ(က) အရ လုပ်သားများရရှိရေးအတွက် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တောင်းခံ၍ တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
(ဂ) ပုဒ်မခွဲ(ခ) ပါ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများသည် မြို့နယ်ဆည်မြောင်းအရာရှိ သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ၌ သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည့် သစ်ပင်၊ ဝါးပင်၊ သစ်သား၊ ဖျာ၊ ဝါးထရံ၊ ကြိုး၊ မြေကြီး၊ အိတ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ၊ သယ်ယူရန်ယာဉ်တို့ကို နီးကပ်ရာဒေသများမှ ရယူအသုံးပြုရမည်။
၃၈။ (က) အရေးပေါ်လုပ်သားများအတွက်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ ရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် သယ် ယူခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းများဖယ်ရှားရာတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် လည်းကောင်း ကျခံရန် လိုအပ်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များကို ခရိုင်ဆည်မြောင်းအရာရှိက ဒေသအလိုက် အမြင့်ဆုံး ဈေးနှုန်းဖြင့် သက်ဆိုင်သူများထံဆောလျင်စွာ ထုတ်ပေးရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ထုတ်ပေးသည့် ငွေပမာဏနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကျေနပ်သူသည် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတင်ပြနိုင်သည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ငွေပမာဏနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
၃၉။ မည်သူမျှ ဆည်မြောင်း သို့မဟုတ် လယ်ကြားမြောင်းကို ပျက်စီးစေခြင်း၊ ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ချဲ့ထွင် ခြင်း သို့မဟုတ် တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်း မပြုရ။
၄၀။ မည်သူမျှ ဆည်မြောင်းသို့မဟုတ် လယ်ကြားမြောင်းရေပေးဝေမှု သို့မဟုတ် ယင်းတို့မှ ပုံမှန် ရေစီးဆင်းမှုကို နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ပိုမိုများပြားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ယုတ်လျော့အောင်ပြု လုပ်ခြင်း မပြုရ။
၄၁။ မည်သူမျှ လယ်ကြားမြောင်းမှရေကို အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေခြင်း၊ ရေပေးဝေမှုကို နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရရှိသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ရေကိုအသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
၄၂။ မည်သူမျှ ဆည်မြောင်း သို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်းအတွင်းသို့ ဆင်း၍ ရေချိုးခြင်း၊ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို လျှော်ဖွပ်ဆေးကြောခြင်း၊ ငါး၊ ပုစွန်ဖမ်းခြင်း၊ ရေကို ညစ်ညမ်းစေခြင်း သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များကို ရေတိုက်ခြင်းမပြုရ။
၄၃။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆည်မြောင်းအတွင်းသို့ ရေယာဉ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ခြင်း၊ သွားလာခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်နားခြင်းမပြုရ။
၄၄။ မည်သူမျှ ဆည်မြောင်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ ကျူးကျော်စိုက်ပျိုး ခြင်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။
၄၅။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆည်မြောင်းနယ်နိမိတ်တိုင်၊ ရေပြင်အနိမ့်အမြင့် တိုင်းမှတ်တိုင် သို့မဟုတ် ရေတိုင်းမှတ်တိုင် တစ်ခုခုကို ဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းဖယ်ရှားခြင်းမပြုရ။
၄၆။ မည်သူမျှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆည်မြောင်းသို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်း၏ လုပ်ငန်းများ၊ ရေမြောင်း များကို ဖြတ်သန်းခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များဖြတ်သန်းသွားလာခြင်း သို့မဟုတ် ရေယာဉ်များမောင်းနှင် ခြင်းမပြုရ။
၄၇။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆည်မြောင်းနယ်နိမိတ် သို့မဟုတ် မြောင်းပေါင်များပေါ်တွင် ယာဉ်များ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခြင်း၊ စက်ယန္တရားတစ်စုံတစ်ရာ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
၄၈။ မည်သူမျှ မြောင်းပေါင်ပေါ်တွင် တိရစ္ဆာန်များလွှတ်ကျောင်းစားကျက်ချခြင်းမပြုရ။
၅၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မ ၄၃၊ ပုဒ်မ ၄၄နှင့် ပုဒ်မ ၄၅ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးသိန်းထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ် ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၅၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မ ၄၂၊ ပုဒ်မ ၄၆၊ ပုဒ်မ ၄၇၊ ပုဒ်မ ၄၈ နှင့် ပုဒ်မ ၄၉ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ် ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လထက်မပို သော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံး ကျပ်သုံးသောင်းမှ အများဆုံးကျပ်တစ်သိန်းထိ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၅၂။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၅၃။ ပုဒ်မ ၃၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများသည် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၁ အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၅၄။ ရေကိုခွင့်မပြုသော နည်းလမ်းဖြင့် သုံးစွဲမှုနှင့် ရေဆုံးရှုံးမှုတို့အတွက် တာဝန်ရှိသူကို တရားစွဲဆိုနိုင် သည့်အပြင် ပုံမှန်ကောက်ခံသော ရေခွန်လည်းစည်းကြပ်ကောက်ခံနိုင်သည်။
၅၅။ The Canal Act. (Burma Act II, 1905.) အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်သရွေ့ဆက် လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
၅၆။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-